Ukufumana iiNkcazo, Emva koko uzihlolisise kabini
Abafundi be-Journalism bavame ukuxhalabisa kakhulu malunga nokufumana ingxaki kwi- newswriting , kodwa abavakalisi abanolwazi baya kukuxelela ukuba kubaluleke kakhulu ukuba ube ngumlobi weendaba.
Emva kwakho konke, ukubhala okungenangqondo kunokuhlambuluka ngumhleli omhle, kodwa umhleli awukwazi ukuhlawula ibali elibi elibi elingenalo ulwazi olubalulekileyo.
Ngoko sithetha ntoni ngokunika ingxelo epheleleyo? Kuthetha ukufumana lonke ulwazi oluchaphazelekayo kwibali owenzayo.
Kuthetha ukutshekisha kabini ulwazi kwibali lakho ukuqinisekisa ukuba lichanekile. Kwaye kuthetha ukufumana onke macala ebali ukuba ubhala malunga nombandela onokuphikisana okanye umxholo wengxabano.
Ukufumana Zonke IiNkcukacha Ezizidingayo
Abahleli banethuba lokufumana ulwazi olulahlekileyo kwiindaba zamabali. Bayibiza ngokuthi "umgodi," kwaye ukuba unika umhleli ibali elingenalo ulwazi, uya kukuxelela, "Unayo ibhola ebaleni lakho."
Ukuqinisekisa ukuba ibali lakho lingenasiphelo, kufuneka ubeke ixesha elide kwingxelo yakho ngokwenza unxibelelwano oluninzi kunye nokuqokelela ulwazi oluninzi lwengcaciso . Uninzi lwabalatheli baya kukuxelela ukuba bachithe ubuninzi bexesha lokubhengezwa kwabo , kunye nokubhala kangangoko ixesha. Kwabaninzi kuya kuba yinto efana ne-70/30 yokwahlukanisa - iipesenti ezingama-70 zexesha elichithwe ingxelo, ukubhalwa kweepesenti ezingama-30.
Ngoko unokwazi njani ukuba uluphi ulwazi olufunekayo ukuqokelela? Cinga kwakhona kwii-5 ze-W kunye ne-H zokubhala ngokubhala - ngubani, yintoni, phi, nini na nini na .
Ukuba unabo bonke abasebaleni lakho, amathuba okwenza ingxelo epheleleyo.
Xa usuqedile ukubhala ibali lakho, lifunde ngokugqibeleleyo uze uzibuze, "Ngaba kukho na i mibuzo engashiywanga impendulo?" Ukuba kukho, kufuneka wenze ingxelo engaphezulu. Okanye unomhlobo ufunde ibali lakho, kwaye ubuze umbuzo ofanayo.
Ukuba kukho ulwazi olulahlekileyo, Chaza isizathu
Ngamanye amaxesha ibali leendaba aliyi kuba nolwazi oluthile ngenxa yokuba akukho ndlela yokuba intatheli ifikelele kule nkcazelo. Ngokomzekelo, ukuba i-dolophu inomhlangano ovaliweyo kunye nesekela-dolophu kwaye ayichazi into endiyithethayo ngayo, ngoko mhlawumbi unokufumana ithuba elithile lokufumanisa okuninzi ngalo.
Kwimeko apho, cacisa kubafundi ukuba kutheni le nkcazelo ingabali kwibali lakho: "I-dolophu inomhlangano owawuvaliwe kunye nomphathi wee-door kwaye akukho sikhulu sasingathetha kubalandeli."
Enye inkalo yokunika ingxelo ngokugqithiseleyo ngcaciso yokujonga ngokuphindaphindiweyo, yonke into evela kwipelo lomntu othile kwixabiso elingu-dollar inani lebhajethi entsha. Ngoko ukuba uthendulana noJohn Smith, khangela ukuba uthetha igama lakhe ekupheleni kwendlebe nodliwano-ndlebe. Kungaba uJon Smythe. Abanyathelisi abanolwazi bazivala ngeenkcukacha eziphindiweyo zokujonga.
Ukufumana Bobabini-Okanye Zonke Izinto-Kule Ndaba
Sixoxisane ngengqondo kunye nokulingana kule ndawo. Xa kubandakanyeka imiba engqubuzanayo kubalulekile ukuxoxa nabantu abajongene neembono ezichasileyo.
Masithi uhlanganisa intlanganiso yebhodi yesikolo malunga nesiphakamiso sokunqabela iincwadi ezithile ezivela kwizikolo zesithili.
Kwaye masithi kukho ininzi yabantu kwiintlanganiso ezimele zombini macala-mbambano-ukuvalwa, okanye ukungavumeli.
Ukuba ufumana kuphela izicaphuno kulabo abafuna ukulahla iincwadi, ibali lakho aliyi kuba lilungelele kuphela, akuyi kuba yinto echanekileyo yento eyenzekayo kwintlanganiso. Ukubika ngokubanzi kuthetha ukunika ingxelo ngokufanelekileyo. Baye bafana kunye.
Buyela kwiiNqanaba ezili-10 zokuvelisa iindaba ezipheleleyo zeendaba
Ukubeka I-altare Yomlingo
I-Biographie kaHernan Cortes, i-Conquistador eyona ntlanzi
Gemstones kunye neMaminerals